Ciidamo Kumaandoos ah oo xalay weerar xoogan ku qaaday Xarun ay Al Shabaab Deganaayeen oo ku yaal Gobolka Sh/ Hoose
Ciidamada Kumaandoosta dowladda Soomaaliya ee ku xareysan Garoonka Balidoogle oo ay wehliyaan ciidamo Ajaanib ah aya xalay waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka Tooro-tooroow ee ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Wararka halkaasi laga helayo ayaa sheegay in dagaal uu ka dhacay deegaanka Tooro-toorow oo ay weerareen ciidamada Kumaadoota ah waxana deegaankasi ku sugnaa Ciidamada Al Shabaab.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dagaalka uu ahaa mid xoogan oo ay ka qeybqaateen diyaaradaha dagaalka, waxana ay tilmaameen qiiq fara badan laga arkayo goobta uu tooska u saameeyey weerarka oo aheyd goob ay dagan yihiin Al Shabaab.
Dagaalkii xalay ka dhacay deegaanka Tooro-toorow ayaa socday muddo saacadaha waxana la sheegay in markii danbe ay ciidamadii kumaandoosta ahaa ee weerarka fuliyay ee dib u soo laabteen.
Qasaaraha dagaalkasi ka dhashay iyo natiijada ay ciidamada dowladda ka gaareen ayaan la ogeyn, madam isgaariisnta deegaanka lagu dagaalamay ay hawada ka maqan tahay, isla markaana ay adag tahay in xog dhab ah laga ogaado dagaalka.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada Kumaandoosta ku sugan Garoonka Balidoogle ay weerar ku qaadaan Magaalooyin ay ku sugan yihiin Xarakada Al Shabaab.